लाईफ स्टाईल Archives - सिम्रिक खबर
Post category:लाईफ स्टाईल
नेपाली समुदायमा गाँउमा हेलाकोे शिकार बनेको तर शहरमा ब्रान्ड बनिरहेको ढिडोको स्वाद कतिलाई थाहा छ ? हाम्रो बुवाआमाको समय उहाँहरुले अधिकांश छाक ढिडो, गुन्द्रुकमै केन्द्रित रह्यो । तर विस्तारै गाँउघरमा…
Continue Reading ढिडो र गुन्द्रुक : गाँउमा हेला, शहरमा सौख !
बाग्लुङ्ग । गलकोट नगरपालिकाले महिलालाई महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड तथा झोला बनाउन तालिम प्रदान गरेको छ । कोरोनाकहरका बीच सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै ती तालिम…
Continue Reading ‘आँशु लुकाउन मिल्ला तर महिनावारी रोकिँदैन’
Post category:Trends / लाईफ स्टाईल
सिम्रिक डेस्क । कछुवाको प्रयोग प्राचीन समयदेखी नै वास्तुको उपयको रुपमा हुने गर्दथ्यो । हामिले मन्दीरमा जाँदा जुन शान्तिको अनुभव गछौं, त्यसको मुख्य कारण मन्दीरमा कछुवाको स्थापना हुनुले हो ।…
Continue Reading एउटा कछुवाले बदल्न सक्छ तपाईंको भाग्य : बास्तु टिप्स
काठमाडौँ । धेरैले भोगिरहेको समस्या हो, कब्जियत । कतिपय अवस्थामा यो क्षणिक पनि हुनसक्छ । तर, खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिएन भने कब्जियतले गंभिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । हामीहरुले समयमा…
Continue Reading कब्जियत त भएको छैन ? यसो गर्नुहोस्
File Photo, Urologyaustin
काठमाडौँ । पिसाब पोल्ने समस्या धेरैलाई हुन्छ र यसलाई मानिसहरुले सामान्य रुपमा लिएर नजरअन्दाज समेत गर्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ यो समस्या केही समयका लागि मात्र रहन्छ भने कहिलेकाही महिनौँ…
Continue Reading पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुनु भन्दा अघिको हाम्रो दैनिक कार्यशैली र हालको कार्यशैलीमा आकाश पातालको फरक बनेको छ । हाल मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र साबुनपानीले हात धुने,…
Continue Reading सावुनपानी प्रयोग गर्ने कि स्यानिटाइजर ?
Post category:लाईफ स्टाईल / समाज
सञ्चिता घिमिरे काठमाडौ- “कार्टुनलगायतका उनीहरुलई रमाइलो लाग्ने चित्रहरु मास्कमा राख्दा त्यो मन पराएर साना बालबालिकाले मास्क लगाउन सक्छन्” जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा.रबिन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो, “किशोरकिशोरीका फेन्सी खालको छुट्टै डिजाइनको मास्क रुचिकर…
Continue Reading मास्क लगाउँदा गल्ती त गरिरहनुभएको छैन ? कस्ता मास्क कसरी लगाउने ?
मौरीको महमात्र होइन, विष पनि उत्तिकै फाइदाजनक
Post category:अन्तराष्ट्रिय / लाईफ स्टाईल
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले मौरीको विषले स्तन क्यान्सरका बिरामीहरुलाइ फाइदा हुने दावी गरेका छन् । उपचार गर्न कठिन मानिने दुई किसिमका क्यान्सर (ट्रिपल नेगटिभ र एईआर(२) विरुद्ध मौरीको विष र…
Continue Reading मौरीको महमात्र होइन, विष पनि उत्तिकै फाइदाजनक
Post category:लाईफ स्टाईल / बिबिध
काठमाण्डौ । अध्ययन गर्ने मान्छेहरुनै नेतृत्वकर्ता बन्छन् । अर्थात लिडर्स आर रिडर्स । यो भनाइ लामो समयदेखी चर्चामा छ । सफल ब्यबसायी तथा उद्यमीहरुका निम्ती अध्ययन एकदम ठुलो कुरा हो…
Continue Reading ब्यबसाय गरी सफल हुन चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए यी हुन पढ्नै पर्ने ज्ञानका विषयबस्तुहरु !
चकलेट । फाइल फोटो । श्रोत गुगल
चकलेटको शौखिन हुनुहुन्छ ? अब विश्वबाट चाँडै नै चकलेटको नामोनिशानो मेटिदैछ !
Post category:लाईफ स्टाईल / अन्तराष्ट्रिय
एजेन्सी । गुलियो भनेपछि कसलाइ मन नपर्ला । चिनिसम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरु बाहेक सबैलाइ गुलियो खान अत्यन्तै मन पर्छ । मधुमेह भएकाहरुलाइ पनि मन नपर्ने त कहाँ हो र ?…
Continue Reading चकलेटको शौखिन हुनुहुन्छ ? अब विश्वबाट चाँडै नै चकलेटको नामोनिशानो मेटिदैछ !